रक्ष कुमार राईको सदस्यता खारेज, एमएनओ–डा.गोपाल गुरुङ सँग सम्बन्ध नरहेको बिज्ञप्ती - MONGOL KHABAR
रक्ष कुमार राईको सदस्यता खारेज, एमएनओ–डा.गोपाल गुरुङ सँग सम्बन्ध नरहेको बिज्ञप्ती
काठमाण्डौ । मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन–डा.गोपाल गुरुङले रक्ष कुमार राईको सदस्यता खारेज गरेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै “मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन–डा.गोपाल गुरुङको विधान भाग ३ को धारा ७ (१) को क बमोजिम मिति २०७६÷०२÷१९ गते भोजपुर छिनाम्खु निवासी रक्ष कुमार राईलाई सदस्यता नं. १०६५२ रहेको सदस्यता प्रदान गरिएका निज रक्ष कुमार राईले संगठनको विधान र घोषणा नीति विपरित कार्य गरेको पाइएकोले आजैको मिति देखि सदस्यता खारेज गरिएको तथा आजैको दिन देखि एमएनओ–डा.गोपाल गुरुङ सँग कुनै सम्बन्ध नरहेको ” भनि उल्लेख छ ।
उल्लेखित धारामा के छ ?
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन–डा.गोपाल गुरुङको विधानमा उक्त धारामा ‘यस संगठनको विधान, घोषणापत्र, नीति, नियम र सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
को हुन राई ?
राईले भने बिद्रोहको तयारी भइरहेको भन्दै नयाँ पार्टीको नाम र झण्डा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन । उनले “गोपाल गुरुङ गलत भएको” आरोप लगाउदै पोस्ट समेत गरिसकेका छन । तर उनले मंगोलवादकै नाम लिएर आफुलाई मंगोलवादी पनि वताइरहेका छन । अहिले सक्रिय एमएनओ–डा.गोपाल गुरुङ लगायत कुनै पनि ठिक नभएको उनको आरोप छ ।
साथै आफू हिट्लर बनेर गद्धार मंगोल नेतालाई ठोक्ने चेतावनी दिएका छन । राईले आफुलाई पूर्व माओवादी लडाकु बताउने गरेका छन । फेसबुकमा उनले हतियार सहितको फोटो लगाई युद्धको तयारी गरिरहेको बताएका छन । तर पहिलो निसाना भने बाहुनवादी भन्दा मंगोल नेताहरुलाई लगाउने धम्की दिइरहेका छन ।
यता मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन–डा.गोपाल गुरुङको योजना त होइन भन्ने मंगोलखबरको प्रस्नमा भने, ‘हाम्रो तत्कालिन त्यस्तो योजना छैन, वैचारिक ढंगले अघि बढिरहेका छौ । डा.गोपाल गुरुङको दर्शनलाई शिरोपर गर्छौ’ ।